Kurban-Bairam ngo-2015: yiyiphi inamba eqalayo. Yiyiphi umhla uKurban-Bayram 2015 oqala eTurkey, Uzbekistan, Dagestan, Moscow, Kazan
Kurban Bairam ngo-2015: yiyiphi inamba eqala eTurkey, Uzbekistan, Dagestan, Moscow, Kazan
I-Kurban-Bayram, njengeminyaka edlulileyo, ngo-2015 iya kubhiyozelwa ngamaSulumane iintsuku eziliqela. Iholide iya kuqala ngoSeptemba 24 . Kwaye umcimbi wamaSilamsi obalulekileyo wonyaka uza kupheliswa ngoSeptemba 27.
Kwezinye iimpapasho ze-intanethi, unokufumana ulwazi olungafanelekanga: uninzi lwamaphephandaba luchaze ukuba i-Kurban-Bayram iqalisa ngoSeptemba 23, kodwa oku akunjalo ngokupheleleyo. Ngokwekhalenda yenyanga, ungaqala ukubhiyozela ngomhla wama-23 emva kokushona kwelanga, kodwa ukufundwa kwemithandazo yemikhosi kuya kuqalisa kusasa ekuseni ngo-Septemba 24.
Amasiko eeholide e-Kurban-Bairam yenziwa kwixesha elidlulileyo. Njengoko iKoran ithi, ngelinye ilanga enye yeengelosi ezinkulu, uJabrayil, yafika ephupheni kumprofeti u-Ibrahim waza wayala ukuba anikele idini unyana wakhe uIshmayeli. Umprofeti akazange amelane nomyalelo weengelosi enkulu waza waya entlameni ukuze alungiselele yonke into yokuba idini. UIsmail wayesazi malunga noko wayekulindele, kodwa ke waya kwintlambo kuyise. Njengoko kamva eqondwa nguyise kunye nendodana, ngoko uAllah wanquma ukuvavanya. Xa u-Ibrahim ephendulela e-Ismail, ummese waba yintsipho kwangoko. Kungekudala umprofeti wenziwa ngenkunzi yemvu kunye nesihloko esithi "Umhlobo ka-Allah".
I-Kurban Bayram 2015 kwizixeko ezahlukeneyo kunye nemimandla yaseRashiya
Ngezantsi uzakufumanisa apho kwaye kwiiyure zeeholide zesiSulumane ziya kubanjwa.
Iyiphi inombolo eMoscow
AmaSulumane aya kuhlangana kwinkunzi yaseRashiya i-Kurban-Bayram kwimikhosi engama-39. Ukuqala kokuthandaza ngo-7 ekuseni, kubandakanywa naseMathedral Mosque (Mira Ave.) naseShahada, ePollonnaya Hill. Kweminye imikhosi yaseMoscow, umbhiyozo uya kubanjwa kamva kamva: umzekelo, kwi-mosque e-Novokuznetsk, amakholwa angaya emthandazweni ukususela ngo-9 ukuya ku-10 ekuseni.
Yiyiphi inamba eqala eKazzan
KwiNkqantosi yaseTatarstan, umthandazo wesondlo usasaqala ngoSeptemba 24 ngo-6 ekuseni (isiqingatha seyure emva kokuphuma kwelanga). Usuku luvakaliswa ngosuku. Uthutho lukawonkewonke luza kuqala umsebenzi ukususela ngo-4 ekuseni, ukuze abemi baseKazan bangakhathazeki malunga nendlela yokufikelela kwimikhosi. Ngama-mosque ngamnye e-Kazan uya kuvula indawo yokudlala yesiko. E-Kul Sharif, ukubhiyozelwa kuya kwenziwa nguMufti Kamil hazrat Samigullin. Ukusasazwa okubukhoyo kwemibhiyozo kwi-mosque ibonakala kwi-TV yesiteshi "TNV" (ukususela ngo-05: 30 ekuseni).
Iyiphi inamba eqala kwiDagestan
KwiRiphabhlikhi yaseDagestan, kunye naseChechnya, i-Ingushetia, i-Kabardino-Balkaria kunye neKarachay-Cherkessia, imini yemikhosi yaseRirban Bayram nayo yabhengezwa ukuba yimihla engasebenzi.
I-Kurban Hayit 2015 e-Uzbekistan
Njengoko kwimimandla emininzi yaseRashiya Federation, e-Uzbekistan usuku lokuqala lwe-Kurban Bairam luya kusuku. Intloko yase-Uzbekistan yalela iminyango kaRhulumente eyahlukeneyo kunye neziseko zokubamba ukubhiyozela iKurban khayit kwinqanaba eliphezulu.
I-Kurban Bayram 2015: yeyiphi inamba eqala eTurkey
Kwimpelasonto eTurkey kwi-Kurban Bayram iza kuqala ngoSeptemba 23 (isiqingatha sesibini semini) ize iphele ngeCawa 27. Idini elinyukayo lihlala lisasazwa kuyo yonke imibutho ekhethekileyo yokunceda ("iRrescent Crescent"). Kwi-Kurban Bairam eTurkey, nabani na onokutyelela nayiphi na i-mosque esebenzayo. Kuzo zonke izixeko ezinkulu (Istanbul, Antalya, Izmir, Ankara) izithuthi zikawonkewonke ziya kusebenza ngeendlela ezongezelelweyo. E-Istanbul, unokutya inyama kwiindawo zokutyela ezincinane kufuphi neBosphorus. IiMyuziyamu kunye neevenkile zivalwa kuphela ngosuku lokuqala - kwiintsuku ezishiyileyo zokubhiyozela, ininzi yazo iya kuvula. I-Kurban-Bayram ibaluleke kakhulu kubantu baseMuslim. Injongo ephambili yeKirban-Bayram kukunyaniseka kuAllah, ukugcinwa kweemfundiso zenkolo nokuqinisa uxolo phakathi kwazo zonke iintlanga.
Umfazi uqhuba imoto
Unyaka omtsha wezithethe zamazwe ahlukeneyo
Kutheni idoli ikhula?
Yintoni ongayifaka kwitafile, ukuhlangana noMnyaka weNyoka?
I-Horoscope ngo-Oktobha 2017 - I-Cancer yomntu-ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
UMaxim Averin ukholisa abalandeli ngemifanekiso ehambayo, ifoto
Ngubani oza kuphumelela i-European Football Championship 2016, izibikezelo kunye nokuhlaziya
Umthombo kunye neempawu zawo zobugqi
U-Alexei Panin wachaza ngevidiyo yesondo kunye nenja
I-Horoscope yama-Aries-abafazi ngo-Matshi 2017
Ukwenza ngokufanelekileyo ngoMatshi 8: I-Top-3 i-bestseller eyithengisa kakhulu i-L'Oréal
Imithetho yaseHollywood: uJoel Gray noJoy Roth
Isaladi kunye nesibindi sesibindi kunye neetatayi